Yaasiin Farey oo isu diiwaangeliyay Hop#067. Asigoon iska caslin Xilkiisa | Dayniile.com
Home Warkii Yaasiin Farey oo isu diiwaangeliyay Hop#067. Asigoon iska caslin Xilkiisa
Yaasiin Farey oo isu diiwaangeliyay Hop#067. Asigoon iska caslin Xilkiisa
Mid ka mid ah shuruudaha Musharaxnimada golaha Shacabka ee ka midka ahaa habraacii doorashada.
Qodobka 8aad in Saraakiisha/Taliyeyaasha Ciidamada, xubnaha guddiyada madaxa bannaan ee Qaramka haddii ay tartamayaan inay is casilaan Saddex todobaad ka hor waqtiga diiwaan gelinta.
Haddaba Kusimaha Taliyaha NISA G/Sare Yaasiin Farey ayaa gudbin wax istiqaalad ah, markii uu is sharaxayay, sidoo kale markii uu ka degay Dhuusamareeb isagoo Taliye ah ayuu tahay oo ay ilaalinayeen Ciidanka NISA ee uu madaxda u yahay.
Gaashaanle Sare Yaasiin Farey ayaa maanta qaatay shahaadada musharaxnimo ee kursiga tirsigiisu yahay HOP#67 maalin kaddib markii Xafiiska Xeer ilaalinta uu ka beriyeelay kiiska Ikraan Tahliil.
Yaasiin Farey waa kusimaha Agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda & sirdoonka qaranka ee NISA, waxa uu u tartamayaa kursiga uu ku fadhiyay Xildhibaan Cabdullaahi Cali Axmed (Caddow Cali Gees), waxaana sidoo kale ku rejo weyn musharixiin kale.
Kursiga HOP#067 ayaa deegaan Doorashadiisu tahay Galmudug waxaana lagu dooranayaa Magaalada Dhuusamareeb maalmaha soo socda sida uu sheegay Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee heer Dowlad-Goboleed Galmudug.
Dhanka kale, Waxaa maanta la diiwaangeliyay musharixiinta kuraasta kala ah:
Guddiga hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Galmudug ayaa rejo ka muujiyay in waqtiga ku habboon lagu soo gabagabeeyo doorashada Kuraasta Golaha Shacabka ee Dowlad-Goboleedkaas ku metalaya Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya.
Shuruudaha musharrixiinta waxaa kamid ah in qofka xil haya uu iska casilo 3 todobaad kahor waqtiga diiwaan galinta.
Previous articleDhacdo Naxdin Leh:- Haweenay Saygeedii Toorreey Ku Dishay
Next articleXildhibaan mahad Salaad ROOBLE maxaa loo xagxaganayaa, maamulada iyo siyaasiinta doorasho diidka ahna indhaha looga qarsanayaa?!
SHACABKA PUNTLAND MA QAADANAYO IN XASILLOONIDA LAGU BEDDESHO DHIBCA KALA QAADASHO...
axmed shiikh - November 26, 2021 0
Xildhibaan Maxamed Ismaaciil Maxamed (Siibed) oo ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa ku baaqay in la soo celiyo nabadda iyo xasilloonida magaalada Boosaaso. Xildhibaan Siibed wuxuu...
Xasan Daahir oo jawaab kulul usoo diray guddoomiyaha hay’adda culumada Soomaaliyeed...
Erdogan oo baajiyey ka qeybgalkiisa shirka COP26 ee cimilada adduunka oo...
Weeraryahanka kooxda Liverpool Maxamed Saalaxoo doonaya qandaraas gaaraya 500,000
Tariibayaal doonayay in ay galaan Yurub oo badda ku geeriyooday
100 qof oo lagu dilay dagaal xooggan oo ka socda Marib...
PUNTLAND: DOORASHADA 10 KAMID AH KURAASTA GOLAHA SHACABKA OO LA SHAACINAYO
Aqoon isweydaarsi ku saabsan cudurada Wadnaha & Neef-mareenka oo Muqdisho lagu...
axmed shiikh - November 11, 2021 0